Fitsarana Anosy Nohitsian’ny Filoham-pirenena ny SMM "ny feon’ny fieritreretan’ny mpitsara no fahaleovantena voalohany " Triatra 20 décembre 2017 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil NEXTHOPE Fitsarana Anosy Nohitsian’ny Filoham-pirenena ny SMM « ny feon’ny fieritreretan’ny mpitsara no...
Tsy am-pihambahambana no nanambaran’ny Filoham-pirenena tamin’ny lahateny nataony nandritra ny fitokanana ireo fotodrafitrasa roa an’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany sy ny fankalazana ny faha-56 taona ny Fitsarana Tampony, fa ao anatin’ny Lalàm-panorenana no ahitana ny foto-kevitra fototra mikasika ny fahaleovantenan’ny Fitsarana.
Tsiahivina mantsy fa io fahaleovantenan’ny Fitsarana io hatrany no foto-kevitra nentin’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) nanatanteraka fikomiana lavareny teo aloha teo. Noho izay indrindra, dia nanambara ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa « ny feon’ny fieritreretan’ny mpitsara no fahaleovantena voalohany ». Manaraka izany, nohamafisiny fa mandalo fotoan-tsarotra ny Fitsarana ankehitriny. Noho izany, hoy izy, tokony ho mijoro tamin’ny fanetren-tena izay nananan’ny mpitsara hatramin’izay ny mpitsara nanoloana ireo fanakianana sy tsikera rehetra mianjady amin’izy ireo sy ny Fitsarana amin’ny ankapobeny. Araka izany, nambaran’ny filohan’ny Repoblika fa « mila mpitsara mafy orina, mila mpitsara tsy mihozongozona amin’ny finoana amin’ny fanatanterahana ny asa amin’ny fahamarinana sy ny fahitsiana, mila mpitsara mahay ny asany, ary indrindra mila mpitsara mahaleo tena sy manana fahefana hampihatra ny lalàna eto amin’ny firenena ».
« Matetika dia mitodika amin’ny Filoham-pirenena ny sasany aminareo mpitsara amin’ny fangatahana izany fahaleovantena izany. Voalaza sy mazava tsara ao anaty Lalàm-panorenana anefa ny fomba hanatanterahana izany. Fa ny fahaleovantena voalohany dia efa nambarako teo fa ny feon’ny fieritreretan’ny mpitsara tsirairay eo am-panatanterahana ny asany. Ka na iza na iza miteny aminareo, ny feon’ny fieritreretanareo no tokony mibaiko anareo eo amin’izany asa izany. Betsaka ny rivotra mety mitsoka, ary lazaina fa avy amin’ny fitondram-panjakana izany, ianareo no mandanjalanja izany, ianareo no mijery izay fomba mety hampiharana ny lalàna sy hanatanterahanareo ny asanareo amin’ny tokony ho izy. Izay no tena fahaleovantena fa na hosoratana an’arivony aza ny amin’izany fahaleovantena izany, ianareo no miaina sy mampihatra izany », hoy hatrany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Hentitra, araka izany, ny Filoham-pirenena nanambara fa tokony hanana fahasahiana mijoro amin’ny fahamarinana sy hananana fahasahiana mandresy ny kolikoly ny mpitsara sy eo anivon’ny Fitsarana amin’ny ankapobeny. « Ny Filohan’ny Repoblika dia sahy milaza aminareo fa izy no mitarika izany ady amin’ny kolikoly izany, ary tsy mihemotra amin’izany. Saingy, tsy ho vitany irery anefa izany fa mila mifanolo-tanana ho amin’izany ny rehetra. Izany no tena aretina mikiky ity firenentsika ity, satria efa tafiditra loatra anatin’ny sain’ny sasany mantsy izany », hoy izy nanamafy.
Nanipy teny ihany koa ny Filoham-pirenena mahakasika ny fampijoroana ny firenena tan-dalàna sy ny fahefam-panjakana eo amin’ny Fitsarana, fa manana andraikitra lehibe amin’izany ny mpitsara, sns.
Article précédentHery Rajaonarimampianina – CSM Tokony ho fieren’ny malemy ny fitsarana – Triatra 4 décembre 2017
Article suivantMadagascar – Pour une justice loin de la corruption – Madagascar Tribune du 20 décembre 2017
Le climat des affaires – Madagascar n’offre des garanties que pour...
Amnesty international – Torture et homicides imputables aux forces de l’ordre...